LIGHTSHOT FREE DOWNLOAD RUSSIAN VERSION MAKA WINDOWS 10 - MMEMME NYOCHA - 2019
Na-amụ anya 5.4.0.35
Onye ọrụ ahụ aghaghị ịdebe ihe ntanetịpụ nke desktọọpụ izigara ndị enyi, chekwaa na kọmputa ma ọ bụ na desktọọpụ. Ma n'ime usoro dịgasị iche iche iji mepụta ihuenyo, ị nwere ike ịfu, yabụ ị ga-ahọrọ ihe kacha mma.
Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na nke a bụ Light Shot, nke na-enye gị ohere ọ bụghị iji ngwa ngwa wepụ ihe ntanetịpụ site na iji igodo na-acha ọkụ, ma dezie ha ozugbo mgbe ị na-azọpụta, nke dị mfe.
Ihe omumu: Otu esi ewepu ihe nchoputa na komputa na ihe di nma
Anyị na-akwado ịhụ: mmemme ndị ọzọ maka ịmepụta ntanetịpụ
Isi ọrụ nke ngwaahịa a dị oke oke. Nbudata ihuenyo nwere ike ime naanị ụzọ abụọ, nke dị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa niile. Usoro mbu - na ịpị igodo dị ọkụ - - enye gị ohere iwere foto nke ihuenyo dum ma ọ bụ otu mpaghara. Ụzọ nke abụọ bụ pịa akara ngosi ihe omume ma họrọ ebe maka nseta ihuenyo.
Ngwá ọrụ software a dị nnọọ mfe maka nhazi ederede. Ugbu a, ọ bụ ihe dịkarịsịrị, ma Ìhè ahụ na - enye gị ohere ịmeghe windo ndị ọzọ, mana iji dezie onyinyo ahụ kpọmkwem tupu ịchekwa.
O kwesiri ịtụle na ọ bụghị maka ọrụ ọrụ ọkachamara na ntanetị ọkụ na-enye ìhè, n'ihi ya, e nwere ngwá ọrụ ntinye ederede, ma nke a bụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihuenyo niile.
Chọọ ihe oyiyi yiri ya
Ngwa ngwa ngwa ahụ nwere otu ihe na-adọrọ mmasị nke a na-adịghị ahụkebe ọ bụla (n'etiti ihe ndị a ma ama na nke a ma ama) - chọọ ihe yiri ya na Intanet.
A na-eme nnyocha site na usoro Google. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịchọta ngwa ngwa na Intaneti dị iche iche nke yiri nha ihuenyo nke ọ dị.
Na-ezigara netwọk mmekọrịta
Onye ọrụ ahụ nwere ike ịkekọrịta ya ngwa ngwa na netwọk mmekọrịta ndị kasị ewu ewu site na Lightshot. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ịkparịta ụka n'Ịntanet ma họrọ ihe achọrọ.
Bulite gaa na ihe nkesa ma bipụta
Mmemme ihuenyo na-enye gị ohere ịkwado niile nseta ihuenyo gaa na ihe nkesa ma ọ bụ bipụta ya na otu click. Mgbe ọ na-ekepụta foto, onye ọrụ ahụ nwere ike igosi ihe dị iche iche na mbiet ahụ, gụnyere ịchekwa, ịdegharị na ndepụta akwụkwọ, ịdepụta, ịchọ ụdị, ịchekwa na sava, na-ezigara na netwọk mmekọrịta.
Ọnụnọ nke editọ ederede nke na-enye gị ohere ịgbanwe ngwa ntanetị a mepụtara.
Enweta ohere ịnweta ọrụ niile.
Russian interface na-enweghị ndị ọzọ nbudata.
Onye ọrụ ahụ ga-echekwa ihe niile e kere eke n'onwe ya, ma ọ bụrụ na arụghị ọrụ a na ntọala.
Oge dị ogologo nke ịzọpụta, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị ọrụ nke ịmepụta nseta ihuenyo.
A na-ewere ìhè dịka otu n'ime ngwọta kachasị mma n'ọhịa ya. N'ihi ngwa a, ọtụtụ ndị ọrụ na-ewepụ ngwa ngwa ma dezie ma ọ bụ gbakwunye ha ihe ozugbo ozugbo e kere ha.
Bido nbudata maka n'efu
Mee nseta ihuenyo nke ihuenyo na Lightshot Ngwa nyocha ihuenyo Clip2net Joxi
Mgbachapụ anya bụ ngwa n'efu maka ịmepụta nseta ihuenyo na atụmatụ ndị bụ isi maka ọrụ dị mma na ọnụnọ onye nchịkọta akụkọ site na ndị mmepe.
Onye Mmepụta: Skillbrains.com